काठमाडौं / जसपा नेपालको विवादका बारेमा निर्वाचन आयोगमा छलफल चलिरहेकै बेला पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । रिट निवेदनमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विभाजित भएको जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।
आयोगले राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने भनेर सबै सदस्यलाई नागरिकतासहित बोलाएको छ । पार्टीको विवाद कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, पार्टीको अवस्था के हुन्छ, कसले आधिकारिकता पाउँछ, सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनले कस्तो प्रभाव पार्छजस्ता विषयमा जसपाका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, महन्थ ठाकुरको साथ छाडेर पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको साथमा गएका यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
-विवादलाई बढाउने काम उहाँ (महन्थ ठाकुर पक्ष) हरुले गरिरहनु भएको छ । हामीले सुरुमा भनेका थियौं, जनतासँग माफी माग्नुस् अनि हामी मिलेर जाउँ, तर उहाँहरुले मान्नु भएन । उहाँहरुले विधि र प्रकृयाबाटै यसलाई सल्टाउने कुरा गर्न थालेपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबीसहित निवेदन दिएका थियौं । हामीले दलको आधिकारिकता माग गरेका छौं तर उहाँहरुको कुनै माग नै छैन । निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते ‘हेड काउन्ट’का लागि कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएको छ । हामीसँग बहुमत छ, हामीले आधिकारिकता पाउँछौं ।
-उहाँहरु सर्वोच्च अदालत गए पनि खास फरक पर्दैन । निर्वाचन आयोगमा कानुनी बहस तथा प्रकृया चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्र्दैमा त्यो प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने होइन । सर्वोच्च अदालतले पनि चलिरहेको प्रकृयालाई रोक्ने काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
-सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन विषय भएकाले त्यहाँबाट निर्णय नआइ अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन । निर्वाचन आयोगमा पनि अदालतजस्तै इजलास गठन भएको छ । अर्थात्, एउटा अदालत निर्णय प्रकृयामा भएको बेला अर्को अदालतले त्यसलाई रोक्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
-उहाँहरुले पार्टीमा अनुशासनहीन काम गर्नुभयो । पार्टीको विधान र विधि विपरीत काम गर्नुभयो । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही ग¥यौं तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । हामीले त्यसलाई स्वीकार ग¥यौं । तैपनि उहाँहरुका हर्कत समाप्त भएनन् । प्रतिगामी कदममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरुले साथ दिनुभयो । संसद विघटनका लागि साथ दिनुको साथै सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो । अर्थात् गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुभयो । हामी बारम्बार सम्झाउँदै गयौं तर उहाँहरुले मान्नुभएन । यसरी त पार्टी बर्बाद हुन्छ, मधेस समाप्त हुन्छ भन्ने सोचेर नै हामी बाध्य भएर पार्टीको आधिकारिकताका लागि असार ५ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुग्यौं ।
-के उपचार खोज्नु पर्थ्यो र, अध्यक्षसहित केही पदाधिकारीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सबै सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका छौंं । हामीले पुस ७ गते त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भनेर बारम्बार खण्डन गरेका छौं । तर महन्थ ठाकुरहरुले त्यसलाई जबर्जस्ती अगाडि बढाउनुभयो । त्यसपछि हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको अधिकारिताका लागि आयोग गएका हौं । हामीले आधिकारिकता मागेपछि उहाँहरु जालझेलमा लाग्नुभएको छ ।
-राजपा बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेमा एउटा म पनि हो । ६ वटा दल मिलेर राजपा नेपाल बनेको थियो । त्यसले मधेसमा निकै राम्रो सन्देश गएको थियो भने जनता उत्साहित भएका थिए । तर जुन उद्देश्यका लागि राजपा गठन भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकिरहेको थिएन । सिद्धान्त, विचार, नैतिकता त्यहाँ केही देखिएन ।
-उहाँहरु साथमा रहन लायक अवस्थामै रहनु भएन । तैपनि हामीले जनतासँग माफी माग्नुस् र सँगै जाउँ भनेकै हो तर उहाँहरुले मान्नुभएन । उहाँहरु केपी ओलीको मतियार बन्नुभयो । संसद विघटनमा ओलीभन्दा बढी जिम्मेवार उहाँ (महन्थ ठाकुरहरु) हरु हुनुहुन्छ । यदि उहाँहरुले नचाहेको भए संसद विघटन हुँदैनथ्यो ।
-होइन, हामीले पार्टी कहाँ विभाजन गरेका छौं र ? हामीले जसपाको आधिकारिकता मागेका हौं । जसपा हाम्रो हो, बहुमत हामीले देखाएका छौं, सगोल जसपा हामीले मागिरहेका छौं । ४० प्रतिशत सांसद र कार्यसमिति पु¥याएर प्रकृयामा गएको भए पो विभाजन मानिन्थ्यो । अहिले हामी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार गइरहेका छौं, यसलाई विभाजन भनिँदैन ।
-एक नम्बर वा कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान कहीँ छैन । उहाँलाई सम्मानपूर्वक एक नम्बरमा राखिएको हो । एक नम्बरमा राख्दैमा सबै अधिकार प्राप्त भयो, अब जे गर्दा नि हुन्छ भने होइन । उहाँहरुले पुस ७ गतेको बैठकले अधिकार दिएको कुरा गरिरहनु भएको छ । जबकि त्यो दिन त्यस्तो कुनै निर्णय नै भएको छैन । फर्जी माइन्युट खडा गरेर अधिकार पाएको भनिरहनु भएको छ ।
-संयुक्त हस्ताक्षरबाट बैठक बोलाउने काम भयो । पार्टीमा सबै काम सहमतिमा भइरहेको थियो । तर जब उहाँहरुको साँठगाँठ ओलीसँग भयो, अनि कुरा बिग्रिन थाल्यो । उहाँहरु बैठकमा आउन छाड्नु भयो । विभिन्न बहानामा बैठकलाई टार्दै जसपालाई बबरमहलबाट चलाउन खोज्नुभयो । जथाभावी विज्ञप्तिहरु जारी गर्न थाल्नुभयो । मनपरी गर्न थाल्नुभयो । अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले एक नम्बरको अध्यक्ष मानिदिने ? उहाँहरुले जालसाजी गरेको कुरा निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छ ।
-होइन, मान्छे सधैँ खराबै हुन्छ भन्ने होइन । उहाँहरु सुध्रिनु भएको होलाजस्तो मलाई लागिरहेको थियो । नयाँ सोच, नयाँ विचारका साथ अब राष्ट्रियस्तरको राजनीति गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो तर उहाँहरु बदलिनु भएन, अनि के गर्ने ? राम्रो सोच, राम्रो विचारका साथ हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौं तर उहाँहरुले बेइमानी गर्नुभयो । उहाँहरुले सत्ता स्वार्थका लागि एकीकरण गर्नुभएको थियो भने कुरा प्रमाणित भयो । त्यसैले अब उहाँहरु आफ्नो बाटो लाग्नुभयो हामी आफ्नो बाटो लाग्यौं ।
– सरकारमा जानु आपत्ति होइन, तर कुन सरकारमा, कुन बेला, कुन परस्थितिमा जाने, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव जाँदा र महन्थ ठाकुर पक्ष जाँदाको परिस्थिति फरक हो । आकाश जमिनको फरक कुरा हो । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसको माग पूरा गराउनका लागि आशा र भरोसाका साथ जानु भएको थियो । ओलीले पुरा गर्नुभएन अनि फर्किनुभयो । तर महन्थ ठाकुरहरु यस्तो सरकारमा सहभागी हुनुभयो जहाँ लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको गला रेट्ने काम भएको थियो । लोकतन्त्र धरापमा पार्ने काम भएको थियो ।
-अहिले केही समय बाँकी छ । पार्टीको विवाद समाधान होस् अनि सल्लाह गरेर जान्छौं । हतार छैन हामीलाई । सरकारलाई बलियो र लोकतान्त्रिक विधिबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको छ । सबै कुरा समाधान गरेरमात्र हामी सरकारमा जान्छौं । – रातोपाटी